Wararka Maanta: Arbaco, Apr 3 , 2013-Ra’iisul Wasaaraha Somalia oo safarkiisii ugu horreeyay ee dibadda ku aaday dalalka ay ciidamada ka joogaan Somalia
Wafdiga uu hoggaaminayo ra’iisul wasaaraha ayaa waxaa isugu jiraan wasiirro, xilddhibanno iyo shaqaale ka tirsan xafiiskiisa, wuxuuna booqan doonaa dalalka: Jabuuti, Itoobiya, Kenya, Uganda iyo Burundi, isagoo ka helay dalalkaas casuumaado rasmi ah.
Xubno ka tirsan wafdiga ra’iisul wasaaraha ayaa HOL u sheegay inuu ka billaaban doono safarkooda dalka Jabuuti oo ka mid ah dalalka ciidammo ka mid ah AMISOM u soo diray Soomaaliya; isagoo kala hadli doona sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal.
Safarkaas kaddib ra’iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxay u gudbi doonaan dalka Itoobiya oo lagu wado inay kulammo kula yeeshaan madaxda dalkaas ay uga qaybgalaan shir looga hadlayo arrimaha Afrika.
Dalka Kenya oo uu ra’iisul wasaaruhu deggenaan jiray ka hor intii aan xilkan ayuu booqan doonaa, waxaana lagu wadaa inuu la kulmo madaxda dalkaas oo uu kala hadlo adkeynta xiriirka labada dal, madaama shacabka Kenya ay doorteen madaxweyne cusub.
Uganda iyo Burundi ayuu sidoo kale booqan doonaa, isagoo kala hadli doona madaxda dalkaas sidii loo xoojin lahaa ciidamada ka joogaan Soomaalia si ay xukuumadda ugu guuleysato in dalka oo dhan ay gacanta ku dhigto.
Dalalka Jabuuti, Kenya, Uganda iyo Burundi ayaa waxaa Soomaaliya kaga sugan ciidammo fara badan oo ku shaqeynaya magaca AMISOM waxayna ka howgalaan gobollo iyo deegaanno badan oo ku yaalla gobollad Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Iyadoo dalka Itoobiya ay isagana ciidammo aan qayb ka ahayn AMISOM ka joogaan gudaha Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo looga bartay inuu booqashooyin ku kala bixiyo gobollada dalka ayaa wuxuu safarkiisan noqonayaa kii ugu horreeyay oo uu ugu ambabaxo dalka dibaddiisa, tan iyo markii xilkan loo magacaabay bishii November ee sannadkii hore.